Iindlela ezingama-20 zokujonga iifashthi kunye ezintle
Bonke abafazi abancinci bafuna ukubukeka kungekuhle kuphela, kodwa banomdla. Nendlela yokuphumeza oku kweli nqaku.
Ngexesha elizayo ukhetha imimoya yakho, zama enye into nge-vanilla. I-Perfumers ithi le ngenye yezinto ezivakalayo zenyama. Ngendlela, i-vanilla ayinakho konke epholileyo kwaye enomnandi kwaye ingenakudla.
2. Amathuba angenamkhawulo
Akukho nto ebi ngaphezu kokuphela kobuhlungu. Nangona kukho, mhlawumbi,. Le nto i-tonal cream esetyenziswa kakubi, imida ebonakalayo eyonakalisa yonke imifanekiso. Ngoko asiyicingi nje kuphela, nathi kunye nabaculi bokuzenzela babumbano, ngokuyinxalenye, nceda uqaphele amadoda. Uyakusindiswa ngamabhuleki, izipongo kunye nomonde, oza kusebenzisa i-blusher kunye ne-tonal cream.
3. Inyaniso kwiwayini
Ngaphandle kokuba umntu engaboni, uya kuthanda "ukunambitha" umlomo wakho ngombala wewayini elidala: i-plum, iberry okanye iidiya - ayikukhathazeki, nokuba yile mivulo yindlela yokuhamba kwexesha. Wena kunye noSamanavernjak uyazi ukuba ukupenda umlomo wakho nge-lipstick elula akuyona into elula , kodwa khumbula ukuba kufuneka isetyenziswe ngokuchanekileyo kwe-calligraphic okanye engasetyenziswanga nhlobo. Khumbula ipensela yomjikelezo kunye neebhontshi ezikhethekileyo.
4. Akukho myalelo
Ukujonga ukupakisha kwakho, abantu abajikelezileyo kufuneka bafumane ingcamango yokuba awuzange uchithe umzuzu omnye kwixesha, kungekhona umgca we-styling. Andizange ndibe nexesha lokumisa iinwele zam.
5. Ukubeka izibane
Kwiminyaka yakho, oogogo abazange bazi ukuba yintoni i-liner ephezulu (isixhobo esinika ukukhanya kancinci). Kwaye ngoku enye ingxaki: kunzima ukukhetha ukhetho. Siyatsho: thatha enye ehlala ixesha elide kwaye ikhangele imvelo.
6. Ilanga ebhotile
Isilungiso esihle sokunqumla, njengelanga, senziwe ukuba sikwenze isikhumba kungekhona nje, kodwa sinobuhle, sishushu. Akunjalo nje ngenxa yokucaca. Ukubunjwa okungenamlinganiselo ngendlela ye-gel okanye i-mousse ihanjiswa ngokufanelekileyo kwaye ayisishiyi "amanqaku" amanqaku kunye namanqatha ekhumbeni.
Ulibale malunga nokulungiswa kweshiya kulo nyaka. Okanye ukwenze ngokucophelela, ukugcina ubuninzi bemvelo nobume bendalo beenki.
8. Ifowuni enye
Imizuzu elishumi yobuthongo obumnandi bokusa, oya kubingelela ukuze udwebe imicibisholo, ngumrhumo ongenakunyanzeliswa wobuntombi. Izicelo vrodeenauchitsya akunakwenzeka - esi sipho esingasamkelwanga sisamkelwanga ukususela kumgca we-on-line u-eyeliner ngesimo sepenti ye-tip.
Ukuba iinwele zikhanya, ke wena, kwaye zihamba kakuhle. Jonga impilo yakho kwaye ungakulibala ukusebenzisa iimpepha ukwenzela ukuba umbane ukhanye (ezinye zeemveliso nazo zilungisa izinwele zakho). Faka isicelo kwimveliso ekupheleni komzobo.
10. Iziganeko zePadel
Yonke into iya kwi nyaniso yokuba eli lixesha umbandela oyintloko wobulili uya kuba yendalo. Sinovuyo nje. Iimpawu zemiqolo kunye neentsimbi zomlomo ezidibanisa nesikhumba.
11. Yongeza imibala
Kwiingubo eziqaqambileyo, unokuzihlaziya ngokulula. I-Orange, imisonto emfusa, i-crimson, ebomvu, ibomvu, kunye nobomvu yonyango lombala wangempela. Kakade, awukwazi ukubiza izinto ezinjalo imihla ngemihla, kodwa ngokuqinisekileyo ufuna ukukholisa ngokwakho ngexesha.
12. Isicatshulwa esingafaniyo
Ngethuba abanye befudumala kunye neenqwelo ezinzima zokubambisana, ukunqanda kwamaqabunga kuzama izambatho zikaValentino, izibambo zeDior, iigravchy zeketi, ukuvumela ukuba ubone umzimba, iingubo zangaphantsi okanye ukungabikho. Inketho ekhululekile ngakumbi - uStella McCartney ugqoke ngeemikhono zangasese. Ngokuqinisekileyo, konke oku kulungele ukuhlwa kunokuba kukho intlanganiso yemihla ngemihla okanye intetho. Nangona, ngakolunye uhlangothi, kuxhomekeke ekubeni ngubani ozama ukuthetha naye.
Amantombazana abukeka enhle kakhulu kwizinto zeendoda, ingaba ihembe elimhlophe okanye i-tuxedo, libeke umzimba. Ngeli xesha, nayiphi imfashishini ayifuni kuphela izinto ezilapha ngentla, kodwa nakwi-suit-air-suit-hat, kunye ne-loffers. Ukunciphisa ngokugqithiseleyo ukuzonwabisa kwamabhinqa elula - i-sequins, iziprintshi zezilwanyana kunye nezixhobo ezinamathele.
14. Inyathelo elibanzi
Izambatho zeepenciliti ezithobekileyo zivunyelwe ukuba zigqitywe kuphela ngabo babambelele kwikhowudi yokugqoka yeofisi. Bonke abanye - ukuma endleleni yokuhlaselwa, ukuze kungabikho nkxwaleko kwi-skirts kunye nezicucu eziphezulu ukusuka kwi-hip.
15. Indlovukazi kwi-pea
Omkhulu, omncinci, onqambileyo, obalabala, odidiyelwe - ngoku i-peas ibonakale phambi kwethu kuyo yonke inkazimulo. Kwi-pea izinto kulula ukuzithoba kunye nokujonga ibhinqa. Ubuninzi bobunzima besintu kunye nonke badibanisa iifowuni zobukhulu obuhlukeneyo, kubonisa isimo sengqondo esilula kwifashoni kunye nokuhleka kwezinto ezihlekisayo.
16. Olubomvu Omnyama
Ukudibanisa imibala yemibala ibonakala ikhangele kwaye ikhangele ingqalelo. Ukuba ufuna ukubamba ukubukeka kwakho, zama izambatho ezinobungqingili ezinobomvu kunye obomvu.
17. Ndifudumale inyoka
Ukunyatheliswa kwengwe engaphendukiyo-into eyintandokazi yeefesistas ezininzi ukuwa kwelolu hlobo lugqithisela umbala we-python. Ngaphantsi kwenkohlakalo yeenyoka zafika izindlu ezifana ne Prada, Gucci, Chloe, Missoni, Dior. Qaphela, i-python ekhohlisayo neyokuzimela ayiyikunyamezela ezinye izilwanyana ezikufuphi, ngoko ukukhulula i-regiment kwisigqoko seengubo zokugqoka, iikhati, izesekeli ze-yuboki kunye nale ndlela yezilwanyana.
18. Iimpawu ezinobungozi
Isikhumba se-Patent, isikhombiso ngomoya we-movie "Night Porter," amathonga kunye namanetha - kwixesha elitsha le midlalo yokudlala indima kunye nesisu asikwazi ukunqandwa.
19. Inhloko emafini
Indawo ekhethekileyo yeekati. Iinqanaba eziqhelekileyo ziza kufaka imfihlelo kwaye zikhangele umdla wesini esahlukileyo. Into ephambili kukuba udibanise i-accessory yezinto ezifashisayo kunye nezingubo ezizinzileyo, kodwa kungekhona ngeengubo ezingcolileyo, okanye ukuthatha ingozi kwi-city crazy.
20. Iimashumi ezithandekayo
Ukukhathala kwe-chic bohemian yee-70? Qaphela ingqalelo yokugcinwa kwee-60 kuphela, kodwa nakwa-40. Ugqoke nje ngaphantsi kweedolo, izandla ezinqambileyo, izixhobo ezintle, iinwele zoboya, imilomo ebomvu. Hollywood Kinodive, kungenjalo.
Amancinci amancinci amancinci amancinci amancinci - iimfashini zemoya 2016
Nento yokugqoka i-turtleneck
Yintoni enxiba ngayo iibhotile ezibomvu?
Ziziphi iintlobo zezambatho
IHoroscope ye-Lion-Woman ngo-Apreli 2017
Ikhekhe "iMicrosoft Magic"
Kutheni abantu abatsha befuna ukuba yingxenye yenkqutyana?
Ungathini ukuba ube yintsiba yekhefu?
Indima yeprogesterone kwimpumelelo yokukhulelwa
Ukuzalwa okusemthethweni: kunye nokuchasene
Ukusetyenziswa kwe-viburnum kwiyeza
Iyintoni imfihlelo yobu buhle bowesifazane?
Indlela yokugcina ubudlelwane emtshatweni?